Ukukhangela Ukufakelwa I-Steel Strip ne-RF Induction Forging Heater
Ikhaya / izicelo / Ukukhutshwa kweeNkcazo / Ukuchithwa kweMigca ye-Steel Strip
Ukukhangela Ukufaka I-Strip Steel
Udidi: Ukukhutshwa kweeNkcazo tags: ukwenza umtya wesinyithi, ukwenziwa kweentambo zentsimbi, inkqubo yokuqokelela intsimbi, ukuqulunqwa kokuqulunqwa, ukuqulunqwa kwendlela yokufakelwa kwintsimbi, intambo yentsimbi, umtya wesinyithi
Ukuchithwa Kwakha I-Steel Strip ne-Induction Heating System
Injongo Ukutshisa umtya we-1025 ngentsimbi ukuya kwi-1800 ºF ngaphambi kwenkqubo yokwenza imveliso yezihlangu zamahashe. Okwangoku, izikhewu ziyasikwa zize zifudunyezwe kwi-oveni evuthayo yerhasi kwaye emva koko zenziwe ngomatshini wokushicilela. Nge coil yoqheliso endaweni, isinyithi sinokutyiswa ngokuqhubekekayo ukusuka kumqolo ngokusebenzisa i-coil yoqheliso kunye nomatshini wokushicilela. Ukuze kuhlangatyezwane nokwanda kwemveliso, ukufudumeza icandelo le-13 ″ lesinyithi kufuneka kwenzeke kwimizuzwana eyi-10.
Impahla yentsimbi ye-1025 malunga ne-3/4 ″ ububanzi kunye ne-1/4 ″ ubukhulu
Ukushisa 1800 ºF
Izixhobo ze-DW-HF-60kW zikhupha umbane oqinileyo wombane kubandakanya indawo yokufudumeza enobuninzi be-0.5 μF.
Inkqubo I-Ameritherm 40 kW yokukhutshwa kombane oqinileyo kufunyenwe ukufezekisa ngokufanelekileyo ezi ziphumo zilandelayo: Iziphumo • I-1800 ºF yafikelelwa kwimizuzwana eli-10.
• Umgangatho wokuveliswa kwenxalenye enye kwimizuzwana emi-1 ukuya kweli-5 kufikelelwe kuwo.
• Ezi ziphumo zingentla zafezekiswa ngokusetyenziswa kwe-coil yesitayile sokujika somsebenzi esingu-39 1/1 ″ ID kunye no-2 11/1 ″ OAL.
Ukuchithwa Okutshatyalaliswayo Okutshintshisayo Kwintsimbi Yenqwelomoya
Ukufudumeza ukuFudumeza Inkqubo yokuFudumeza okuBushushu